Zviratidzo Zvisinganzwisisiki - Kubvunzurudza Mibvunzo Nemhinduro - ITS Tech School
Zviratidzo zvisinganzwisisiki - Kubvunzurudza Mibvunzo neMhinduro
Kudzidzisa kwakadzika kunogona kukupa iwe unyanzvi hunotarisirwa kuparadzanisa dhina-yakagadzirwa nedhina uchishandisa Splunk software. The Splunk Analytics ichakupa mukana wekutarisa mabhuku makuru e data. Ichi cheSplunk certification course chinosanganisira kudzidziswa mubvunzo unokosha, kugoverana nekuregererwa kwemigumisiro, kugadzira mabhii uye mhando dzezviitiko, kubudisa mitsara, uye zvisikwa zvechirati. Ichakubatsira iwe ace splunk engineering, Splunk syslog, syslog server, log examination, alarms, mubvunzo, uye dashboards uye kukuita iwe unyanzvi wekugadzira Splunk.
Kushandisa Splunk kuchachinja bhizinesi rako uye kuitora kunhanho inotevera. Izvo zvingaita, mubvunzo ndewokuti: Unomanikidzira maitiro uye kukwanisa kuva Splunker? Pachinhu chakanaka chokuti hongu, ezvo zvigadzirire iwe unotyisa zvikuru unotarisira mushandi-mushure mekuona kwekuti kushorwa kunoshamisa. Iwe unogona kutanga nekuona mibvunzo yakanyanyozivikanwa yakawanda yeSplunk yemibvunzo inotaurwa mune iyi blog.
10 Mibvunzo Inobvunzurudzwa Nemhinduro dzeSplunk Certification
Chii chinonzi Splunk? Nei Splunk inoshandiswa pakutsvaga dhecting data?
Ndezvipi zvikamu zve splunk / splunk engineering?
Chii chinoshandiswa neLisense Master muSplunk?
Chii chinonzi Splunk DB chinosangana?
Tsanangurira 'kuputsa kwepaisensi' kubva pane zvakatarisa.
Ndezvipi zvakarongedza runyararo mu splink?
Ndezvipi zvakasiyana pakati pematunhu uye zviitiko zvinorayira?
Ndezvipi mabhodhoro eSplunk? Tsanangurira chinogona kupedza upenyu.
Kunzwisisa simba reAlert Manager?
Tsanangura kusiyana pakati pekutsvaga musoro musoro nekutsvaga musoro bunching?
Hazvina kunaka ndeyeGoogle yeminjini yako data. Iyo software / motokari inoshandiswa pakufungidzira, kutarisa, kuzivisa, nekucherechedza dhizinesi yako yebhizimisi. Zvisina kunaka zvinotora mari yakawanda yemashini uye inoishandura kuva ruzivo ruzivo rwekushandisa kuburikidza kupa nguva chaiyo kunzwisisa kune data yako kuburikidza nemashadi, kunyevera, zvinyorwa nezvimwe zvakadaro.
Zvinoshandiswa zvinoshandiswa pakutsvaga mhando yemashini sezvo ichigona kupa zviitiko mukushanda kwekushandiswa, IT maitiro, kuchengeteka, kushanduka, kusarudzira zvisiri izvo, kukanganisa kwengozi nezvakadaro.
Tarisa musoro - inopa GUI kutsvaga
Indexer - mafaira machine data nedata.
Mutariri - Forward logs to Indexer
Server deployment - Inoshandisa zvigunwe zvinoparadzaniswa mumamiriro ekuparadzirwa.
License ace muSplunk inotarisira kuvimbisa kuti chiyero chakanaka che data chinowanikwa. Chiremera chiduku chinoenderana nehuwandu hwemashoko hunoenda padanho mukati mewindo re 24hr uye pamwe nemiganhu iyi, kuvimbisa kuti pasi rinoramba riri mukati memiganhu yehurukuro yakawanikwa.
Icho chizere che SQL database module iyo inokubvumira kuti usanyatsokwanisa kusanganisira data ye database neSplunk mibvunzo uye zvinyorwa. Inopa kuvimbika, kunogadziriswa uye kuenzaniswa kwemazuva chaiwo pakati peSplunk Enterprise nedzimwe nhepfenyuro dzehukama.
Muchiitiko chekuti iwe unoparadzanisa ruzivo rwemashoko, ipapo ucharatidza 'chikwata chekuputsa' kukanganisa. Iro revha rinonyevera rakakandwa, richagara kwemazuva 14. Mune bhizinesi kana bhizimisi rebhizimisi unogona kuva neZviso zve 5 mukati mewindo rekufambisa kwezuva re 30 iyo iyo Indexer's list yako zvinhu uye zvinyorwa zvinorega kushanda. Mukusununguka, icharatidza chete 3 teteti yekuchenjerera.
Iyo Summary list ndeyoyo faira yepepeti yefaira (iyo faira inogadzirisa Bhizinesi inoshandisa pane pangozi kuti iwe hauratidze mumwe). Pamusana pekuti iwe unosarudza kushandisa mhando dzakawanda dzemashoko ekunyorwa kwemashoko iwe unogona kudiwa kuti uwedzere mafaira ekuderedza.
Nhamba dzinoshevedza kuita rundown inzwisisiro yega yega yega imwe neimwe minda iripo mumugwagwa wako wakaiswa uye usavaita sehumwe huri mutsva. Zvikwereti zvakafanana nezvikwereti zvinotengesa, kunze kwezvikamu zvekuunganidza izvo zvinowanikwa mukati mechiitiko kune chimwe nechiitiko uye kungoita kuti zvikamu zvose zvakabatana nechiitiko ichocho. Zvipfeko zvinonyora zvakabvunzwa zviyero zvakadai sezvibatanidza, zvisinei kuti zvose zvinowanikwa kune dhamba rekutanga risina basa.
Rimwe bhuku rine data rakanyorwa rinonzi seSplunk container. Izvo zvinowedzera zvine zviitiko zveimwe nguva. Upenyu hwepilisi hunobatanidza kutora mushure mezvikamu:
Hot - Inenge yakafanana nedzimwe deta rakanyorwa uye yakasununguka pakugadzira. Kune rumwe rutivi rwemashoko, pane bhasi rimwe chete rinopisa rinowanikwa
Warm - Munzvimbo inodziya yedhadharo inotamirwa kubva kune inopisa
Cold - Cold stage data yakabva kune ushamwari
Frozen - Dhiyabhorosi inobva kune frosty. Inonyorwa inodzinga data yakanyatsosimbiswa sechinhu chechokwadi asi vatengi vanogonawo kuiisa.
Thawed - Mashoko akadzorerwazve kubva pane faira rekodhi. Paunenge uine mukana wekuti iwe unyore deta yakanyatsosimbiswa, iwe unokwanisa kuidzorera zvakare ku rekodi ne (defrosting) iyo.
Mutariri akagadzirira anoratidza rundown yevakawanda sekupedzisira kurega kungwarira, semuenzaniso, zviitiko zvakagadzirira. Inopa kuwirirana kuona mazita akanyorwa kubva pane izvozvo zvakarongedzwa. Izvo zvinoratidzawo zita rakagadzirira, kushanda, kuronga (rakanyorwa, rakanyatso-nguva, kana kutama hwindo), kukanganisa uye nzira.
Tsvaga kubatanidza musoro iko kuungana kwevavhavha akabatanidzwa ayo anoshandiswa kugoverana mutoro, Kugadzirisa uye nhamba yevashandi apo kutarisa boka boka riri chikamu chebhanga rinoshandiswa rinoda kuzadza sechinhu chakakosha chekutsvaga. Sezvo boka guru rekubvunzurudza rinowedzera chikamu chekubatana, dashbhoards yakafanana uye zvinenge zvichitsvaga zvinogona kushandiswa uye zvakaonekwa kubva kune mumwe munhu kubva kune boka.
Bvunzurudza Mibvunzo - Mhinduro dzeCyber-Security Professionals
50 Inonyanya Kukurukurirana Mubvunzo Unogona kutarisana neVabvunzurudzo